China Ugboro abụọ gburugburu ntụ ntụ ntekwasa Waya ntupu ngere maka ọchịchị injinịa Manufacturer na Supplier | Oghere
Uzo a gbara okirikiri abuo bukwara nke a gbachiri ntupu, nke ejiri waya igwe mee. Ọ bụ nchara nchara eji waya ikuku (ụfọdụ ndị na-emepụta ihe na-eji waya waya ojii kama) jikọtara ọnụ na mbụ wee chọọ igwe ikuku iji mee ka O mee elu na ala. Ọ bụ a elu ike na inogide waya ntupu nsu na-eji predominantly dị ka elu nche mgbochi.
PRO.FENCE na-enye gburugburu gburugburu waya ntupu ngere ka ejiri galvanize waya ntupu panel wuo ma mechaa ya na ntaneti electrostatic. Nke ahụ ga - eme ka mgbochi na - agbatị ma gbasaa oge ojiji. Ejiri ụdị ejiji O-emee ka ichoro ogige gị mma ma ugbu a iche onye agbata obi gị. Yabụ, eji ya eme ihe n'ọtụtụ ebe obibi, obodo, ogige ntụrụndụ, okporo ụzọ wdg.
O nwere otutu ngwa tinyere otutu ebe ana-adọba ụgbọala, ọdụ ụgbọ elu, okporo ụzọ, ụlọ obibi na ihe ndị ọzọ.
Ntupu: 60 × 120mm
Ogwe ogwe: H1200 / 1500/1800 / 2000mm × W2000mm
Biputere: φ48 × 2.0mm
Emechara: Powder ntekwasa (Brown, Black, Green, White)
1) Ike dị elu
Ogige a gbara gburugburu bụ ụdị welded waya ntupu, ma nwee oghere ntanetị iji mee ka ike ahụ dịkwuo ike.
2) Ọ dị mma
O-udi n’elu na ala anaghị enye ya nkọ ma ọ bụ akụkụ siri ike iji zere mmebi nke eriri waya nye ndị mmadụ ma mee ka ọ mara mma. Ọzọkwa, Powder mkpuchi na agba dị iche iche iji gboo mkpa nke ịchọ mma.
3) Mgbochi imebi emebi
PRO.FENCE iji akara Akson a ma ama maka mkpuchi iji mee ka ọrụ mgbochi na ọrụ ndụ dịkwuo mma.
Nkebi Nke.: PRO-09 Ebute :bọchị: -21BỌCH 15 15-21 Nbanye ngwaahịa: CHINA
Nke gara aga: 358 Ogwe mkpuchi waya dị elu maka ngwa ụlọ mkpọrọ, na-agba ụlọ maka nchedo ihe onwunwe
Osote: Ogige ugbo maka ehi, atụrụ, mgbada, ịnyịnya
358 High nche waya ntupu nsu maka ụlọ mkpọrọ a ...